Mr Li oo fashilmay & Milan oo geleeysa milkiyadda Elliott (Maxaa xiga?) | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Mr Li oo fashilmay & Milan oo geleeysa milkiyadda Elliott (Maxaa xiga?)
Mr Li oo fashilmay & Milan oo geleeysa milkiyadda Elliott (Maxaa xiga?)
(Milano) 09 Luulyo 2018 – Isku daygii saa’idka ahaa ee uu Li Yonghong ku hollinayay inuu Milan iibiyo ayaa u muuqda mid fashilmay, taasoo keenaysa inay Milan ku wareegto gacanta hay’adda ay u qaamaysan tahay ee Elliott.
Ganacsadahan Chinese-ka oo dalab uu horay uga diidey Rocco Commisso, iminka doonayay ayaa la xaajoonayay milkiilaha Monaco ee Ruushanka ah ee Dmitrij Rybolovlev, balse waxba kama soo naasa caddaanin.
Iminka hay’adda Elliott ayaa bilaabaysa qaadista tillaabooyinka sharciga ah ee loo baahan yahay si ay kooxda iyo hantideedaba ula wareegto, taasoo ay wararka qaar qorayaan inay iminkaba socoto, waqti yarna ay ku dhamaystirmayso.
Mr Li oo kooxdan la wareegey 13-kii Abriil 2017 ayaa bixin la’ 32 milyan oo ay maalin dhowayd ka bixisay Elliott oo horayna ugu lahayd 303 milyan oo euro, waxayna dad badani is waydiinayaan waxa uu mar hore uga tabaabushaydan waayay arrintan, haddiiba uusan haynin kharash uu kooxda ku dhaqaajiyo.
Elliott ayaa laba middood yeelaysa, waa mide inay kooxda geliso kharash dhan 150 milyan oo euro si ay qiimeheeda sare ugu qaaddo kaddibna sii iibiso sanad kaddib iyo in ay haatanba horay ka iibiso.
Previous articleRuushka oo Yurub ku hoggaaminaya dhanka dabaqyada dhaadheer oo mid kale dhisaya + Sawirro
Next articleDAAWO: Erdoğan oo si qurux badan usoo dhoweeyay madaxwayne Farmaajo